NewsILike sy ny mpanangona zava-kanto · Global Voices teny Malagasy
NewsILike sy ny mpanangona zava-kanto
Voadika ny 17 Oktobra 2018 3:02 GMT
Nanandrana ny NewsILike.com, tranonkala mpanangom-baovao napetraky ny ekipa ahitana an'i Jim Moore, mpiara-miasa ao amin'ny Berkman, mpikatroka Darfur sady mpiara-dia ato amin'ny Global Voies aho. Mampahafantatra ny hevitra “fanangonana artistika” i Jim, hevitra hoe afaka ho fanehoana zava-baovao mitovy fomba amin'ny bilaogy ny fanangonam-baovao.
Misy itovizana betsaka amin'ireo mpanangom-baovao antserasera hafa tahaka ny BlogLines ny NewsILike, saingy manana songadina manan-danja tsy mbola hitako tany an-toeran-kafa: fanivanana lahatsoratra. Afaka namorona sivana Afrika aho, izay natao hifanaraka amin'izay rehetra fanononana firenena Afrikana, ary ahafahako misoratra anarana amin'ny fitaovana fanangonam-baovao amin'ny famahanam-baovao lehibe – toy ny famoaham-baovao manerantany an'ny Guardian – ary manivana azy mba hifanaraka amin'ny tantara mifantoka amin'i Afrika ihany.
Ka ity no dingana voalohany mankany amin'ny fitaovana fanangonam-baovao Afrika, ahitana ny fampahalalam-baovao mahazatra tsy mamoaka afa-tsy tantara miresaka Afrika, sy ireo bilaogy afrikana mahafinaritra. (Rehefa tsy miditra aterineto hijery ny kaonferansa feno aho, dia hanangona loharanom-baovao lavidavitra kokoa.) Efa mahita tantara sy lahatsoratra mahaliana maromaro sahady aho izay tsy hita ao amin'ny BlogAfrica na ny loharanom-baovaoko.
Satria lasa sehatra matanjaka kokoa ny NewsILike, azoko sary an-tsaina fa toy ny fitaovana manampy betsaka ho an'ny Global Voices izany, izay ahafahantsika mampiaraka ireo fitaovana fanangonam-baovao manokana mifantoka amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao. Misy te-hanangona ireo fanangonam-baovao Afovoany-Atsinanana, Amerika Latinina na Aziatika Afovoany ve?
Karaiba 31 Desambra 2021